Best Fence eye wash station Mugadziri uye Fekitori | Bohua
1. Chinyorwa: 304, 316 simbi isina simbi kana kabhoni simbi inosarudzika, kambani inogona kupa mushumo wekuyera we spectrometer;
2.Iye yekuwachisa uye yekugezera zvakateedzana zvakapoteredzwa nefenzi mbiri. Vashandisi vanopinda mufenzi kuti vageze maziso avo kana shawa vanogona kubata fenzi nemaoko, izvo zvine njodzi; chiteshi chewashow chakakamurwa kuita nzvimbo dzekugezesa uye dzekugezesa, uye vashandisi vanogona kushandisa nzvimbo dzakasiyana zvinoenderana nemamiriro ezvinhu ；
3. Kana mushandisi akamira munzvimbo inochengeterwa maziso, tsika chitsoka chetsoka, iyo eyewash inozoerekana yaburitsa mvura, uye chifukidzo cheguruva chinosvinwa, uye chikamu chemvura chinoyambuka nekumbundira. Kugeza kwemaziso kuyerera ≥ 11.4L / min, mushure mekushandisa, dzorera ziso rekushambidza ruoko kusunda ndiro
4. Kana mushandisi akamira mufenzi yenzvimbo yekugeza, tsika tsoka, tsoka yemvura inovhurwa otomatiki, uye mvura inoburitswa kubva mushower, uye yekuyerera yekuyerera iri -76L / min;
5. Iyo yekugezera iri 1520mm kure kubva pakamira nzvimbo yemushandisi, uye dhayamita yechipfuva renji yakakura kupfuura 510mm;
6. Saina ndiro: Pane zvitatu zvingasarudzwa: yakajairika chiratidzo chikwangwani, inopenya chiratidzo chiratidzo uye yemagetsi chikwangwani ndiro;
7. Ruzha uye mwenje aramu chishandiso uye DCS chiratidzo kurodha chishandiso zvinosarudzika
8. Chikamu chekuputika-chiratidzo uye giredhi rekudzivirira rinogona kugadziriswa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi
9. Kamwene kemeso ane sefa yakavakirwa-mukati kusefa tsvina mukati memvura uye kuita kuti mvura iyerere ichipinda furo remvura rine furo, zvinonyatso kudzivirira kusvibiswa kuri mumvura kana kukonzera kukuvara kwechipiri kumitsipa yeziso yakakuvara uye nhengo dzakakuvara nekuda kwemvura yakawandisa kuyerera.
10. Gungano: Chikamu chepakati chegungano reziso rinotora zvikamu makumi matatu nemakumi matatu nekukanda, izvo zvine simba rekumanikidza kurwisa uye mhando iri nani.
Pashure: 65L ZVINOGONESESA GIRAVHA FED EYEWASH